Fahasamihafana eo amin'ny Acrylamide sy Bisacrylamide | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Acrylamide sy Bisacrylamide | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / fahasamihafana eo amin'ny acrylamide sy bisacrylamide
Fahasamihafana eo amin'ny Acrylamide sy Bisacrylamide
7 Jona 2016 Narotsak'i Abey SD
Fahasamihafana lehibe - Acrylamide vs Bisacrylamide
Satria mitovy ny anarana roa acrylamide sy bisacrylamide, ny firafitr'izy ireo simika koa dia misy fitoviana. Ny molekiola Bisacrylamide dia misy molekiola acrylamide roa natambatra namakivaky ny -CH 2 - tetezana amin'ny alàlan'ny atoma Nitrogen ao amin'ny vondrona amide. Ity rohy ity dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fanesorana atômanan'ny hydrôneana iray ary avy eo ny fifamatorana amin'ny atôman'ny karbaona ao amin'ny vondrona CH 2 . Ny roa amin'ireo fitambarana ireo dia manan-danja tokoa amin'ny indostrialy ary ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany. Ny fitambaran'ireto fitambarana roa ireto dia ampiasaina amin'ny fampiharana sasany. Ny maha samy hafa ny Acrylamide sy Bisacrylamide dia ny formule simika an'ny Acrylamide dia C 3 H 5 NO fa ny formule simika an'ny Bisacrylamide dia C 7 H 10 N 2 O 2 .
Inona ny Acrylamide?
Ny anaran'ny IUPAC an'ny acrylamide dia prop-2-enamide, ary ny endriny simika dia C 3 H 5 NO. Izy io koa dia fantatra amin'ny anarana hoe acrylic amide . Acrylamide dia matevina tsy misy fofona sy kristaly fotsy. Izy io dia mety levona ao anaty solvents sasany toy ny rano, etanol , etera ary kloroform. Mihena izy io rehefa misy asidra, bases , mpiasan'ny oxidizing , sira vy sy vy ao amin'ilay mpanelanelana. Rehefa mitranga tsy amin'ny thermally ny fanapahana dia mamorona amoniaka (NH 3 ) izy io , ary ny fihenan'ny hafanana dia mamokatra gazy karbonika (CO), gazy karbonika (CO 2 ) ary oksida azota.
Rafitra simika an'ny Acrylamide
Inona ny Bisacrylamide?
Ny Bisacrylamide dia fantatra amin'ny anarana hoe N, N'-Methylenebisacrylamide ( MBAm na MBAA ) ary ny endriny molekiola dia C 7 H 10 N 2 O 2 . Izy io dia mpandraharaha mpampifandray ampifandraisina ampiasaina amin'ny famolavolana polymers toy ny polyacrylamide . Izy io koa dia ampiasaina amin'ny biokimia satria izy io dia iray amin'ireo fitambaran'ny gel polyacrylamide. Izy io dia afaka polymerize amin'ny acrylamide, ary mamorona rohy miampita eo amin'ny rojo polyacrylamide, mamorona tamba-jotra polyacrylamide fa tsy rojo polyacrylamide mitohy.
Rafitra simika an'ny Bisacrylamide
Inona no maha samy hafa ny Acrylamide sy Bisacrylamide?
Mampiavaka ny Acrylamide sy Bisacrylamide
Acrylamide: Ny endrika molekiola ao amin'ny acrylamide dia C 3 H 5 NO, ary ny firafiny simika dia aseho etsy ambony.
Bisacrylamide: Ny endrika molekiola an'ny bisacrylamide dia C 7 H 10 N 2 O 2, ary ny firafiny dia aseho etsy ambony.
Acrylamide: Acrylamide dia simika ampiasaina amin'ny fizotran'ny indostrialy tena ilaina toy ny fanamboarana taratasy, plastika ary loko. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny zavamaniry fitsaboana rano hitsaboana rano fisotro sy rano maloto. Ny acrylamide kely dia ampiasaina hamokarana vokatra mpanjifa sasany toy ny fitaovana fonosana sakafo, ary ny adhesives sasany.
Bisacrylamide: Bisacrylamide dia ampiasaina amin'ny fampiharana mikraoba; izy io dia afaka manova syntetika ho polymers vaovao sy ny fitambarana manana fananana bakteria. Ankoatr'izay dia ampiasaina hamokarana gel polyacrylamide amin'ny gel elektroforesis. Izy io dia mamorona fifandraisana misy eo amin'ny acrylamide sy bis-acrylamide. Ny refy eo amin'ny acrylamide sy polyacrylamide dia mamaritra ny toetran'ny gel polyacrylamide. Izy io dia afaka mitazona ny fihenan'ny gel; satria manana ny fahaizana mamorona tambajotra fa tsy rojo mitanjozotra.
Be dia be:
Acrylamide: na dia teo amin'ny sakafo aza ny Acrylamide hatramin'ny nanombohan'ny fandrahoana azy dia hita tamin'ny sakafo tamin'ny 2002 (Aprily).
Ny acrylamide dia miforona voajanahary amin'ny vokatra sakafo starchy amin'ny fahandroana hafanana ambony (amin'ny 120 o sy ny hamandoana ambany); toy ny fanendasana, fanendasana ary fanendasa. Izany dia mitranga noho ny fihetsika simika antsoina hoe "Maillard reaction" izay sakafo "volontany" ary misy fiantraikany amin'ny tsirony.
Izy io koa dia afaka mamorona avy amin'ny siramamy sy asidra amine (indrindra amin'ny asparagine) izay misy voajanahary amin'ny sakafo maro. Ho fanampin'izany, ny acrylamide dia hita ao anaty crisps ovy, fries French, biscuits, mofo, ary kafe. Saingy, tsy mitranga amin'ny fonosana sakafo na amin'ny tontolo iainana. Ankoatr'izay, hita ihany koa izy amin'ny fitaovana tsy sakafo toy ny setroka paraky.
Bisacrylamide: Bisacrylamide dia mpampifandray misy ara-barotra ampiasaina amin'ny acrylamide izay azo ampiasaina ho vovoka maina sy vahaolana efa nifangaro.
Karazan-tsolika menaka sy vokatra famaritana menaka. (nd). Nalaina tamin'ny 6 Jona 2016, avy eto
TOKU-E, ny fivoaran'ny BioPurity. (nd). Nalaina 06 Jona 2016, avy eto
N, N'-Methylenebisacrylamide. (nd). Nalaina 06 Jona 2016, avy eto
Inona no maha samy hafa ny acrylamide sy bisacrylamide? (nd). Nalaina 06 Jona 2016, avy eto
Fahasamihafana eo amin'ny Acrylamide sy Polyacrylamide Fahasamihafana eo amin'ny Glass sy Crystal Fahasamihafana eo anelanelan'ny angovo maimaim-poana Gibbs sy ny angovo Helmholtz Fahasamihafana eo amin'ny Nucleotide sy ny Base Fahasamihafana eo amin'ny atoma sy ny fitambarana
Filed Under: Chemistry Tagged With: Acrylamide , Acrylamide ary Bisacrylamide fahasamihafana , Acrylamide toetra , Acrylamide strcuture , Acrylamide vs Bisacrylamide , acrylic amide , Bisacrylamide , Bisacrylamide toetra , Bisacrylamide firafetana , Chemical Structure of Acrylamide , Chemical Structure, Bisacryide , Bisaclamide , MBAA , MBAm , Fampiasana Acrylamide , Fampiasana Bisacrylamide
Momba ny mpanoratra: Abey SD
Fahasamihafana eo amin'ny fahalavoana maimaim-poana sy ny fihetsiketsehana
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Exhibit 4G sy HTC Sense 4G
Fahasamihafana eo amin'ny reny sy ny reny
Fahasamihafana eo amin'ny hematoxylin sy Eosin
Fahasamihafana eo amin'ny kaody Swift sy kaody IBAN